10 Tilmaamood oo Loogu talagalay Naqshadeynta Degel Websaydh ah oo Wada Wadayaasha Iibsadayaasha iyo Iibiyeyaasha Inay Ku Hawl galaan | Martech Zone
Iibsashada dhisme, guri, ama kondho waa maalgashi muhiim ah… badanaa waxay dhacdaa kaliya hal mar noloshaada. Go'aamada iibsiga guryaha waxaa dhiirrigeliya dad badan oo shucuur mararka qaarkood is burinaya - marka waxaa jira waxyaabo badan oo u baahan in laga fiirsado marka la qorsheynayo a websaydhka guryaha taas oo ka caawinaysa safarka iibsiga.
Doorkaaga, wakiil ahaan ama dillaaliinta guryaha, waa inaad fahamto shucuurta adoo ku hagaya dhanka caqliga iyo xulashada aqoonta. Halkan waxaa ah lix talo oo ku saabsan naqshadeynta iyo hagaajinta boggaaga taasi waxay kaa caawin doontaa inaad noqoto hoggaamiye dijitaal ah suuq geynta guryaha.
Talo 1: Ku dar Raadinta Gudaha iyo Awoodda Shaandhaynta
Marka rajadaadu u adeeganeyso guryaha, waxay had iyo jeer maskaxda ku hayaan shuruudo gaar ah. Isla marka booqdaha ku yimaado bartaada, tus iyaga inaad bartilmaameedsan karto baahidooda oo aad soo bandhigto guryaha u dhigma waxa ay raadinayaan.
Ku dar meeleyn cad oo ah goob baaris gudaha ah oo leh miirayaal kuu oggolaanaya inaad kala soocdo guryahaaga guryaha. Haddii waxqabadyadaadu ku urursan yihiin iibsashada guryaha, tusaale ahaan, ku dar qiimaha, nooca dhismaha, muuqaalada laba jibbaaran, cabirka badan, tirada qolalka jiifka, tirada musqulaha, iyo astaamaha kale (dabka, barkadda, garaashka, iwm.).
Haddii alaabadaada ay kujiraan gobollo kaladuwan, noocyo dhul ah, iyo qaabab dhismeedyo, waxaad rabi kartaa inaad balaadhiso awoodaha shaandhaynta si ay iibsadayaashaadu ugu yaraadaan raadinta xaafadaha gaarka ah iyo sifooyinka kale ee hantida.
Talada 2aad: U Samee bog Gobol Kasta
Xulashada xaafad ayaa lagama maarmaan u ah iibinta guri. U hibee bog gobol kasta, xaafad kasta, ama xitaa degmo dugsiyeed halkaas oo aad ku bixiso iibinta ama kireysiga guryaha. Gali macluumaad wax ku ool ah oo muhiim ah si aad wax uga ogaato gobolka. Had iyo jeerna ku dar khariidad si sax ah u soo bandhigeysa mid kasta oo ka mid ah guryahaaga oo ay la socdaan meelaha kale ee xiisaha leh:
Adeegyada dhow (iskuulada, dukaamada, rugaha caafimaadka, isbitaalada, kaniisadaha)
Goobaha madadaalada (jardiinooyinka, barkadaha dabaasha, koorsooyinka golf)
Soojiidashada dalxiiska ee agagaaraha
Had iyo jeer la xiriir qaab nololeedka laga helo xaafadda. Ma deegaan xasilloon oo ammaan ah, ayaa ku habboon qoysaska dhallinyarada ah, ama halkii xaafad isbeddel ah oo u dhow makhaayadaha ugu fiican, shineemooyinka, iyo hoolalka waxqabadka Marka lagu daro ku wargalinta martidaada meelaha aysan garaneynin, bogaggan waxay horumarin doonaan tusmeynta boggaaga raadinta gaarka ah.
Talo 3: Bixi Sharaxaad Kasta oo Guri kasta
Iibsadaha qadka toosan maanta ma doonayo inuu waco wakiilka guryaha ama dallaal si uu u helo macluumaad muhiim ah. Hubso in bogagga faahfaahinaya guryahaaga ama unugyadaadu ay ku jiraan macluumaadka soo socda:
Tirada qolalka, oo ay ku jiraan qolalka jiifka iyo musqulaha
Muuqaalka laba jibbaaran, meesha lagu nool yahay, iyo aagagga qolalka (metric iyo Imperial)
Nidaamka korantada, kululaynta, iyo biyaha
Meelaha dibedda lagu noolaado (balbaladaha, dusha sare, iwm.)
Goobaha iyo adeegyada guud ee la bixiyo (marka laga hadlayo guryaha is-kaashatada)
Alaabta guriga ama qalabka guryaha oo lagu dari doono
Sanadkii dhismaha ama hagaajinta lagu sameeyay waqtiga
Fursadaha dayactirka cusub (tusaale. Dib u habeynta hoose)
Iyo, dabcan, ku dar sawiro la yaab leh oo ku saabsan dhinac kasta oo hantida ah, oo ka baxsan guriga xagal kasta, sawirrada qol kasta, iyo xitaa muuqaallada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee hantida. Haddii sawirku u dhigmo kun eray, qiyaasi sida ay u saameyn weyn ku yeelan doonto daraasiin sawirro qurxoon leh! Uma baahnid inaad shaqaaleeysid sawirqaade xirfad leh smartphones taleefannada casriga ahi waxay leeyihiin awoodo la yaab leh maalmahan. Xagasha saxda ah iyo nalka, waxaad kuheli kartaa sawirro heer sare ah oo soo qabanaya faahfaahin kasta oo hantida ah.
Talo 4: Bixi Macne Si Aad Ula Wadaagto Hantida
Iibsadayaasha guryaha ma guurtada ah ee maanta wax iibsadaa si dhif ah ayey kaligood u dukaameystaan, markaa u soo bandhig fursado dhowr ah oo ay kula wadaagi karaan emaylka, warbaahinta bulshada, ama fariin qoraal ah. Xitaa waxaad jeclaan kartaa inaad bixiso foomka “U dir saaxiib ama jaalle’ foom oo qabta cinwaankooda email iyo liisaska ay daneynayaan - kaliya ka taxaddar inaad dejiso waxyaabaha laga filayo inaad la xiriiri doontid iyo in kale.
Sidoo kale hubi inaad sameyso xiriir kasta oo la socon karo si aad u fahmi karto adeegyada warbaahinta bulshada ee wada saamiyada ugu badan iyo booqashooyinka guryahaaga.
Talo 5: Ka Dhigo Inaan Kula Soo Xiriiro Si Fudud, Shaqsiyeed, iyo Cadaadis-Bilaa
Maaddaama iibsadayaashu ay inta badan ka labalaabaan inay la xiriiraan wakiillada iyo dilaaliinta, waxaad u baahan doontaa inaad iyaga ka dhigto kuwo aad u deggan. In kasta oo aad ku darto magacyada iyo lambarrada taleefanka ee wakiilkaaga, hubi inaad ku darto sawir sidoo kale farriin shaqsiyeed oo ah in baaritaankooda uu noqon doono mid aan cadaadis lahayn.
Hubso inaad ku darto foom bog kasta oo guri ah oo ay la socdaan macluumaadka guriga ee ku jira meel qarsoon. Sidan oo kale, markaad la xiriirto iyaga, waad baari kartaa guriga oo diyaar u noqo wadahadalka!
Talada 6: Qabashada Falanqaynta iyo La Soco Xogta booqdahaaga
Haddii aad yar tahay ama aad tahay ciyaaryahan weyn oo ka tirsan qaybta guryaha, waxaad shaki la'aan ka faa'iideysan doontaa ururinta macluumaadka ku saabsan booqdayaashaada. Qeybtaan ka mid ah istiraatiijiyadda suuqgeyntaada ayaa laga yaabaa inay qaadato muhiimad is bedbeddela, iyadoo kuxiran miisaaniyadda iyo ilaha aadanaha ee aad haysato. Qalab badan oo maareynta hogaaminta ah ayaa faa'iido badan yeelan kara marxaladan.
Foomamka Qabashada Macdanta "Lead"
Ku billow aruurinta macluumaadka ku saabsan booqdayaashaada adoo ku qancinaya bixinta cinwaankooda e-mayl waxay faa'iido u tahay raadinta guryaha. Waa kuwan tusaalooyin yar oo xeelado wax ku ool ah oo lagu soo qabanayo macluumaadka rajada ee warshadaha guryaha:
Fursadaha furitaanka guriga iyo kuwa gaarka loo leeyahay
Tartan ama dallacsiin
Liiska VIP ee loogu talagalay dalabyada gaarka ah ee guryaha (tusaale. Hoos u dhaca qiimaha)
Tilmaamaha iyo talo bixinta guryaha ee gobolka
Ogeysiisyada guryaha cusub
U dhig foomamkaaga sida badhano popups, slide-ins, ama ku dheji hoose ee bog kasta.
Si kastaba xaalku ha ahaadee, diiradda saar ujeedadaada koowaad: aruurinta macluumaadka macaamiisha mustaqbalka. Ka fogow tartamada aan mugdiga ku jirin ama dallacaadaha aan la xiriirin badeecada aad iibineyso, haddii kale, waxaad ku dhiirrigelin kartaa booqdayaasha aan u qalmin inay isdiiwaangaliyaan. Caqabada hortaagan qabashada kuwa wax iibsan kara iyadoo la takoorayo dadka soo booqda ee aan danaynayn guryahaaga.
Bogagga Soo Degida ee La Raaci Karo
Haddii aad maalgashanayso dadaallada xayeysiinta iyo suuqgeynta, ha khaldamin inaad ku hagaajiso taraafikadaada oo dhan bogga gurigaaga. U samee bogag degitaan gaar ah il kasta - ha ahaato xayeysiinta wargeysyada maxalliga ah, boorarka, ama farriin emayl. Adiga oo abuuraya isla markaana shakhsiyeeya a bogga soo degida ee dhexdhexaad kasta ama kanaal kasta, ma aha oo kaliya inaad awood u yeelan doonto inaad la socoto wax ku oolnimada suuqgeyntaada, waxaad sidoo kale shakhsiyeyn kartaa farriinta halkaas.
Bog kasta oo soo degaa waa inuu lahaadaa hal ujeedo oo keliya. Isticmaalaha imanaya boggan waa inuu awood u yeesho inuu fahmo dalabkaaga dhowr ilbiriqsiyo isla markaana uu u arko inuu yahay mid xiiso leh oo ku filan inuu buuxiyo foom macluumaadkiisa shaqsiyeed.
Waa kuwan qaar ka mid ah fursadaha wanaagsan ee degitaanka bogagga:
Ku dhawaaqida hanti ma guurtada ah oo cusub
Maalin furan ama dalxiis dalxiis oo gaar loo leeyahay
Soo degsashada hagaha iibsiga guryaha
Su'aalo-weydiin laga caawinayo iibsashada guri
Dalab xayeysiin ah oo ku saabsan cutubyo gaar ah
Talo 7: Naqshadeynta Qalabka Mobilada Marka Hore
In kastoo desktop-ka ay bixiso tan hanti maguurto ah (pun loogu talagalay) si qurux badan loogu soo bandhigo macluumaadka, ku dhisida khibrad isticmaale aaladda moobiilka oo caqli gal ah oo fududna ay noqon karto mid dhib badan. Haddii ay horumarinayso bog raadinta taasi oo isku dhafan ama a socdaalka hantida guurtada ah ee guryaha halkaas oo isticmaaleyaashu ay suulka ka gali karaan sawirrada hantida, naqshadeynta moobiilku waxay muhiim u tahay saameynta naqshadeynta websaydhka guryaha.
Waqti ku qaado adoo isticmaalaya boggaaga adoo adeegsanaya qalabka mobilada isla markaana ka dalbo ra'yi asxaabtaada iyo asxaabtaada sida ugu fudud ee loo isticmaali karo bartaada. Waxaad sidoo kale dooneysaa inaad kala soocdo raadintaada moobiilka, qulqulka booqdaha, iyo sameysashada xogta laga helo booqashooyinka moobiilka si loo hubiyo inay u habboon tahay isticmaale ahaan iyo rafcaan.
Haddii aad ugu talagasho moobaylka marka hore, ha la yaabin markaad ku aragto boodbood aragti muuqaal-raadineed oo tirada iibsaduhu sii kordhayaan! Mobaylku wuxuu muhiim u yahay degel kasta oo ka mid ah warshadaha guryaha!
Talada 8aad: Bilow Blog A Estate Blog
Balooggu waa fursad qumman oo lagula macaamilo iibsadayaashaada mustaqbalka. Wadaagista sheekooyinka shaqsiyadeed, talooyinka iibsiga guryaha, ganacsiyada gobolka ee aad ka bogaadiso, furitaanka maqaayadaha cusub, iskuulka, iyo macluumaadka canshuuraha ee deegaanka… dhamaantood waxay dhisayaan awoodaada iyo xiriirka aad la leedahay macaamiishaada. In kasta oo laga yaabo inaadan waligood la kulmin, baloog wuxuu siiyaa fursad ay ku kugu bartaan hogaamiye ay ku kalsoonaan karaan bulshada aad wax u iibineyso.
Marka laga soo tago iibka, doorkaaga la-taliye wuxuu muhiim u yahay xiriirka ganacsi ee aad la horumariso macaamiishaada. Iibsashada guri waa mid muhiim ah, marka maamul dhisid ahaan wakiilka guryaha ee booqdahaagu ku kalsoonaan karo ayaa gabi ahaanba muhiim ah.
Joogtaynta balooggu waa hab fiican oo loo haysto macmiil sidoo kale. Haddii aad bixinayso talo ku saabsan lahaanshaha guriga, dayactirka, dib u habeynta, iyo kor u qaadista qiimaha hantidooda - iibsade ayaa maanka ku hayn doona haddii la rarayo oo ay u baahan yihiin inay wax iibiyaan, ama qoysaskoodu is beddelaan oo ay u baahan yihiin inay u guuraan guri ku habboon
Mawduucyada aad ku isticmaali karto bartaada internetka waa kuwo aan dhammaad lahayn. Waa kuwan tusaalooyin yar:
Guri iibsashada (shuruudaha, xulashada, doorashada, maalgelinta)
Dib u dejin iyo dhaqaaq
Isbeddellada suuqa guryaha
Daweynta sharciga (dukumiintiyada sharciga ah, dammaanadaha, cilladaha qarsoon)
Deggagga caanka ah
Talada xilliyeed (jardiinooyinka, dayactirka, iwm.)
Talada 9: Bilow Wargeys
Waxaan ka wada hadalnay fikradaha rukunka ee kor ku xusan foomamka qabashada hoggaankaaga, laakiin muhiimadda wargeys lama dhayalsan karo. Bal qiyaas joornaalkaaga oo macnaheedu yahay inaad ku riixdo websaydhkaaga iibsadahaaga ama macmiilkaaga… adoo siinaya talo qiimo leh, ilaha gobolka, iyo sii wadista kalsoonida iyo kalsoonida iyaga. Hadday tahay wax iibsade, waxay aakhirka heli karaan hantidii ay raadinayeen. Haddii ay tahay macmiil, waad sii wadi doontaa inaad xiriir la yeelato iyaga markaa markay diyaar u yihiin inay iibiyaan, waxaad noqon doontaa wakiilka maskaxda ku haya!
Xusuusin dhinac: Wargeysku uma baahna culeys! Websaydhada casriga ahi waxay leeyihiin quudinta isku xidhka oo si otomaatig ah loo qaabeyn karo, loo qorsheyn karo, loona daabici karo barxad emayl iyadoo aanad waligaa u baahnayn inaad taabato badhan! Kala hadal kooxdaada naqshadeynta websaydhka sida loogu daro RSS si aad ugu dirto awoodaha.
Talada 10: Kor u qaad boggaaga iyo joornaalkaaga… Meel kasta!
Ku dar URL-ka boggaaga kaar ganacsi kasta, xaashi, dukumiinti, saxiixa iimaylka, saxiix, iyo wax kasta oo kale oo aad sameyso. Iibsadayaasha maanta waxay jecel yihiin inay is-adeegaan oo ay u adeegsadaan websaydhka si ay u baaraan oo ay u gaaraan go'aannada iibsiga Markaad la kulanto iibsadeyaasha, iibiyeyaasha, xirfadlayaasha warshadaha, iyo milkiileyaasha ganacsiyada gobolka ee meel fagaare ah, weydii haddii aad uga qori karto joornaalkaaga. Waxaa laga yaabaa inaad la yaabto tirada gudbinta iyo saamiyada ay ka kooban tahay waxyaabahaagu soo saari doonaan dhawr bilood ka dib xawaaraha.
Tilmaamahan, waxaad si fiican ugu qalabeysan tahay inaad sare u qaaddo saameynta mashruuca dhismaha guryaha ee websaydhka!
Tags: guryaha guurtada ahtours wareegahantida maguurtadabogagga degista guryahasuuq geynta guryahamobilada guryahawarsidaha guryahagoobta dhismahanaqshada goobta dhismahawebsaydhka guryaha